Bal is bar-bardhig Ganacsade Ahmed Cisman Geele (ina Geele Arab) iyoGancasatada Somaaliland ee ilma jinni boqor. qalinkii A/rahman Fidhinle UK | Cabays.com
April 7, 2019 - Written by Cabays
1- Waa geesi maalgelin balaadhan ku sameeyey Somaaliland Bari ilaa Galbeed; Wuxuu dalka ka dhisay Wershada COCA COLA oo ah Wershad caalami ah oo uu ku maalgeliyey lacag dhan $35 million oo dollar. Waxaana Wershedaa iyo wax soo saarkeeda ku nool oo ka shaqeeya shaqaale gaadhaya 5 kun oo muwaadiniin reer Somalilaan ah. Ganacsaduhu wuxuu si mug leh uga qayb qaatay kobcinta wax soo saarka dalka iyo kobcinta heerka nolosha bulshada Somalilaan.